BitJob စျေး - အွန်လိုင်း STU ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitJob (STU)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitJob (STU) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitJob ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $15 470.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitJob တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitJob များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitJobSTU သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000313BitJobSTU သို့ ယူရိုEUR€0.000264BitJobSTU သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000239BitJobSTU သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000284BitJobSTU သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00278BitJobSTU သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00197BitJobSTU သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00689BitJobSTU သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00116BitJobSTU သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000415BitJobSTU သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000436BitJobSTU သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00688BitJobSTU သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00242BitJobSTU သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0017BitJobSTU သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0234BitJobSTU သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0528BitJobSTU သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000429BitJobSTU သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000478BitJobSTU သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00973BitJobSTU သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00217BitJobSTU သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0333BitJobSTU သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.371BitJobSTU သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.121BitJobSTU သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0228BitJobSTU သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00855
BitJobSTU သို့ BitcoinBTC0.00000003 BitJobSTU သို့ EthereumETH0.0000008 BitJobSTU သို့ LitecoinLTC0.000006 BitJobSTU သို့ DigitalCashDASH0.000003 BitJobSTU သို့ MoneroXMR0.000004 BitJobSTU သို့ NxtNXT0.0244 BitJobSTU သို့ Ethereum ClassicETC0.00005 BitJobSTU သို့ DogecoinDOGE0.0903 BitJobSTU သို့ ZCashZEC0.000004 BitJobSTU သို့ BitsharesBTS0.00963 BitJobSTU သို့ DigiByteDGB0.01 BitJobSTU သို့ RippleXRP0.00111 BitJobSTU သို့ BitcoinDarkBTCD0.00001 BitJobSTU သို့ PeerCoinPPC0.00104 BitJobSTU သို့ CraigsCoinCRAIG0.143 BitJobSTU သို့ BitstakeXBS0.0133 BitJobSTU သို့ PayCoinXPY0.00546 BitJobSTU သို့ ProsperCoinPRC0.0392 BitJobSTU သို့ YbCoinYBC0.0000002 BitJobSTU သို့ DarkKushDANK0.1 BitJobSTU သို့ GiveCoinGIVE0.677 BitJobSTU သို့ KoboCoinKOBO0.0713 BitJobSTU သို့ DarkTokenDT0.000288 BitJobSTU သို့ CETUS CoinCETI0.903